विद्याको जनकपुर विवाह पंचमी भाँडभैलो
विद्याले जनकपुर गएर भाँडभैलो मच्चाएर आई। मिथिला को इतिहासमा, जनकपुर को इतिहासमा, विश्व इतिहासमा यो पहिलो हो। कि जनकपुर मा विवाह पंचमी मनाउन दिइएन। ठुलो कुरा हो। यो बड़ो सुनियोजित किसिमले भयो।
हिन्दु राष्ट्र गायब पारे वानर बाहुन हरुले। राजस्थानको राजा को हिन्दु राष्ट्र। त्यसको ठाउँमा राखे सनातन धर्म। सनातन धर्म भनेको Old Testament जस्तो। हिन्दु धर्म New Testament जस्तो। यिनी हरुले त्यसै आफुलाई यहुदी सँग तुलना गर्दैनन्। यहुदी को जस्तो साइंस टेक्नोलॉजी केही पनि छैन तर आफुलाई यहुदी सँग तुलना गर्छन।
यिनले रामलाई मान्दैनन्। भगवानको पनि कहीँ हातखुट्टा हुन्छ? जबकि रामले इनलाई वानर देखे। न यिनीसँग राज दरबार छ न केही। जंगल मा बसेका छन। कंदमूल खान्छन्। मन्त्र उच्चारण गरेको देखेनन्। देखे पनि ल मेरो नाम जपेछन् जस्तो लाग्यो होला।
सीता प्रति अन्याय भयो। यो कुरा सबैभन्दा बढ़ी हुने गरेको ठाउँ राजा जनक को दरबार। Free speech र scholarship को tradition छ मिथिलामा। र त्यो भएको जुन सुकै ठाउँमा कुनै पनि विषय वस्तुलाई बिभिन्न एंगल बाट हेर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। जनकपुर आएर कसैले सीता प्रति अन्याय भएको कुरा newsbreak गर्छु भनेर नसोंचे हुन्छ।
विद्या महिला हरुको राम वरण। हामी पुर्वीय महिला दबिएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्छे। सीता प्रति उसको चासो छैन। बरु भोलि जनकपुर मा भेला हुने प्रदेश संसदले आजको महिला का लागि ठोस कानुन हरु बनाउँदै जानुपर्छ। सीता को जीवन बाट पाठ सिक्दै महिला लाई अन्याय हुन नदिने वातावरण बनाउनु पर्छ। तर त्यो विद्याको एजेंडा नै होइन। विद्याको एजेंडा नस्लवादी हो।
राम वरण लाई नेपाल सरकार ले जनकपुर पठाउँदा प्लेन मा पठाउने गर्थ्यो। तिमी त राष्ट्रपति, कहाँ बसमा जाने, लु प्लेन को टिकेट। विद्या दुई वटा हेलिकॉप्टर चढेर आई पुगी। राम वरण को काठमाण्डु मा बेइज्जत भइरहेको समाचार नपाएका मधेसी लाई newsflash गर्न आएकी। घाउमा नून छर्किन।
धर्म निरपेक्षता चाहिएको नै यसै का लागि हो। यी सनातनी हुन, हिन्दु होइनन्। धर्म निरपेक्षता मा दुबै ले ठाउँ पाउने भन्ने हुन्छ। किनभने धर्म राज्य को सरोकार होइन। राज्य सरोकार भनेको स्कुल हॉस्पिटल बाटोघाटो।
विद्याको जनकपुर भ्रमण सनातनी हरुको हिन्दु धर्म मथिको प्रहार हो। भने पछि धर्म निरपेक्षता चाहिएको कि नचाहिएको?
राजा जनक को राज्य हिमाल देखि गंगा सम्म थियो। भन्ने गरिन्छ। तर मैले आजसम्म कतै राजा जनक अथवा राजा जनक को सेनाले सैनिक अभियान चलाएको वृतांत पढेको छैन। बुद्ध ले बिना बल प्रयोग दुनियाको पहिलो गणतंत्र स्थापना गरे। मुघल अकबर ले हाम्रो भूभाग मा ज्यादती गरेन। आजसम्म मधेसी ले अकबर लाई स्नेह गर्छ। एक जना मधेसी आर्यभट्ट को शुन्य को आविष्कार माथि आज सारा विश्व सभ्यता टिकेको छ। मधेसी अशोक को चक्र भारत को तिरंगा मा छ।
वानर हरुले हामीसँग सभ्यता सिक्ने हो।
प्रचंड गणतन्त्रवादी होइन कि सनातनी हो।
bidya bhandari Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai